Tontolo nofinofy izay itambaran'ny endrik'olombelona amin'ny natiora avy amin'i Tomasz Alen Kopera | Famoronana an-tserasera
Tomasz Alen Kopera dia teraka tamin'ny 1976 tany Ko? uchiow, Polonina. Nanatrika ny Oniversiten'i Wroclaw University of Technology izy izay nahazo mari-pahaizana momba ny injenieran'ny asa fanorenana. Ny talenta ara-javakanto dia efa niseho tamin'ny fahazazany. Mandoko menaka amin'ny canvas i Tomasz Alen Kopera. Ny natiora olombelona sy ny mistery an'izao rehetra izao no aingam-panahiny isan'andro. Ny sary hosodoko dia ampidirina amina sary famantarana izay matetika mifandraika amin'ny psyche olombelona sy ny fifandraisan'ny olona amin'ny tontolo manodidina. Maizina sy mistery ny sary hosodoko.
Ny teknika novolavolaina nandritra ny taona maro dia manaporofo a fahatsapana lehibe ary ny talentan'ny artista. Malaza amin'ny azy i Tomasz maranitra amin'ny antsipiriany y fifehezana loko.
Amin'ny asako dia manandrana manatratra ny fahatsiarovan-tena aho. Te hihazona ny sain'ny mpijery vetivety aho. Miezaka ny hisaintsaina azy araka izay tratra aho, handinika ilay asa.
Tamin'ny 2005, nifindra tany Irlandy Avaratra izay misy azy izao ilay mpanakanto. Nanomboka ny taona 2010 dia mpikambana tao amin'ny vondrona izy angidina noforonin'i Lukas kandl. Avy eo avelako ireto fanoharana manaitra anao ireto, izay mampatsiahy ahy manokana ny amin'ny 'Ny tantara tsy misy farany'nataon'i Michael Ende.
Araka ny hitanao amin'ny fanoharana nataony, mahatalanjona ny sary sy ny kanto asehony. Goavana ny eritreriny ary ny fahalalana manao sary dia tsy mitovy amin'ny fahalalana mandoko. Tiako manokana izany. Avelako ho hitan'izy ireo ny tranonkalany fanoharana, ary afaka manaraka azy amin'ny tambajotra sosialy.
Fuente [Tomasz Alen Kopera]
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Tontolo nofinofy izay mampifangaro ny tarehin'olombelona amin'ny natiora an'i Tomasz Alen Kopera